> Resource> Naghachi> Olee otú iji weghachite ehichapụ Pictures si Blackberry usoro 8530/9360/9330
Ọ ga-weghachite ehichapụ foto ndị si Blackberry usoro?
Azịza ya bụ ee. N'ozuzu, photos na ị na weghaara site na ekwentị na-azọpụta na kaadị ebe nchekwa. Mgbe ị na-ihichapụ photos, ị na-agaghị n'ezie ihichapu ha ruo mgbe ebighị ebi, ma naanị akara ha dị ka na-abaghị uru na-eme ka ha apụghị ịhụ anya. Na ebe ndị photos've adia na-akara dị ka reusable maka ọhụrụ faịlụ. Ozugbo ị zọpụta ọhụrụ foto ma ọ bụ ndị ọzọ faịlụ n'ebe ahụ, gị aga na photos ga-overwritten site ndị ọhụrụ na i nwere ike inwe ha azụ ọzọ. Ya mere, ihe mbụ niile mbụ, i nwere na-ekwentị gị ma ọ bụ kaadị ọma ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ naghachi ehichapụ foto ndị si gị Blackberry usoro 8530, 9360, 9330, wdg
Naghachi furu efu foto site na Blackberry usoro bụghị otú ike dị ka ị na-eche. N'ezie, ị na-apụghị imezu ya iferi-aka. Tupu ị na-eme ihe ọ bụla, na-a Blackberry usoro foto mgbake omume, nke nwere ike na-eme ọtụtụ maka gị. Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche banyere ya, ebe a bụ m umeala n'obi nkwanye: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac. Ma nke software bụ n'ụzọ zuru ezu pụrụ ịdabere na ọkachamara. Ha pụrụ inyere gị naghachi ehichapụ na formatted photos, video na ọdịyo faịlụ site nile di iche iche nke Blackberry ekwe ntị, nakwa dị ka ndị ọzọ mobile igwe ka HTC, Samsung, Motorola, Nokia, LG na ndị ọzọ.
Download free ikpe mbipute a Blackberry usoro foto mgbake software ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị.
Olee otú naghachi foto site na Blackberry usoro
Step1. Ẹkedori blackberry usoro foto mgbake omume
Mbụ, jikọọ gị Blackberry usoro ekwentị na kọmputa na-akwado ya nwere ike achọpụtara. Ọ bụrụ na ọ na-apụghị, nwere ga-abụ anụ ahụ na-emebi, na gị mkpa idozi ya tupu n'ịrụ foto mgbake. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume ị na arụnyere na kọmputa, na pịa "Malite" ke akpan interface na-amalite Blackberry usoro foto mgbake.
Step2. Ike iṅomi ehichapụ faịlụ gị Blackberry Cruve
Ọ bụrụ na gị na ekwentị achọpụtara, ị pụrụ ịhụ na ọ na interface dị ka ndị na. Họrọ ya na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu faịlụ na ekwentị gị.
Step3. Preview na-agbake ehichapụ foto ndị si Blackberry usoro
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu ndị photos otu otu mbụ. Ego ndị ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" zọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Blackberry usoro ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke Blackberry usoro foto mgbake
Olee otú iji weghachite ehichapụ Ndi ana-akpo si Gmail / Outlook / Android / iPhone